RASMI: Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta laacibka isbuuca ee Champions League oo lagu dhawaaqay – Gool FM
Martin Keown oo ku baaqay in xiddig ka tirsan Arsenal gabi ahaanba laga saaro shaxda koowaad ee kooxda
RASMI: Isku aadka wareega 16-ka tartanka Europa League oo la sameeyey… (Qaabkee ayeey kooxaha isugu aadeen?)
RASMI: Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta laacibka isbuuca ee Champions League oo lagu dhawaaqay
(Yurub) 18 Abriil 2019. Waxaa la shaaciyey ciyaartoyda ku tartami doona abaal-marinta laacibka Isbuuca ee Champions League kaddib markii xalay iyo habeen hore la ciyaaray lugta labaad ee siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub.
Afarta kooxood ee Liverpool, Barcelona, Tottenham iyo Ajax ayaa iska xaadiriyey wareegga Semi-finalka Champions League xilli ciyaareedkan.
Xiriirka qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay afarta laacib ee u sharraxan abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa todobaadkan Champions League.
Da’yarka ka tirsan kooxda reer Holland ee Ajax taasoo reebtay naadiga Juventus ee Matthijs de Ligt ayaa bandhiggii uu sameeyey kulankii ka dhacay Magaalada Turin oo ay ku reebeen Juve waxa uu ka mid yahay xiddigaha afarta ah ee ku tartami doona abaal-marinta laacibka todobaadka ee Champions league.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi oo wacdaro ka raaciyey kooxda Manchester United ayaa ka mid ah musharraxiinta kaddib markii uu labo gool ugu shubay kooxda reer England.
Indhayarka kooxda Tottenham ee Heung-Min Son oo bandhig aan innaba caadi ahayn soo bandhigay kulankii xalay ee Manchester City kaddib markii uu labo gool dhaliyey kooxdiisuna ay u soo baxday wareega xiga ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda tartamaysa.
Waxaa ugu dambeeya oo musharraxiinta laacibka isbuuca Champions League ku jira Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Roberto Firmino kaasoo isna si wacan u dheelay kulankii ay xalay ka horjeedeen FC Porto.